Blueberry ogologo: ụdị kachasị ewu ewu na nkọwa na foto - Berry - 2020
Nke kacha mma iche n'ogige ogologo blueberries
N'ime afọ ole na ole gara aga, blueberries akwụsịwo ijikọta ọnụ ahịa nnukwu mkpụrụ osisi tomato na mgbagwoju anya nke na-eto ha n'ubi. E nwere ihe omuma banyere ọrụ ebube beri, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-elekọta ubi nwere ike ịnwale aka ya na-eto eto. Ka anyi choputa ihe ndi di iche iche di iche iche di elu.
Blueberry ogologo iche "Patriot" - osisi nke osisi na-eto eto. Nke a pụtara na ọ ga-ekwe omume iri nri na tomato na etiti oge okpomọkụ.
Ogo nke osisi breeze ahụ na-amalite site na 150 cm ma nwee ike iru 2 m. Mkpụrụ ndị ahụ buru ibu, ruo 2 cm n'obosara. Nke a dịgasị iche iche ọ bụghị nanị n'ihi nnukwu mkpụrụ nke mkpụrụ osisi dị ụtọ, kamakwa n'ihi oke mma nke osisi ahụ.
Na mmiri, ọtụtụ okooko ga-icho mma gị ubi, na-egbuke egbuke epupụta ga-na alaka tupu mmalite nke mbụ ntu oyi. Owuwe ihe ubi na-egbochi njem na nchekwa ọzọ, mana obi ụtọ ya na-enwe mmetụta karịsịa mgbe owuwe ihe ubi gasịrị.
Ịkwadebe ịkụ osisi na saịtị kwesịrị ịṅa ntị na gooseberries, currants, yoshtu, raspberries, lingonberries, irgu, oké osimiri buckthorn, blakberị, goji, ọlaọcha ọkpọ, oriri honey suckle, hawthorn, cranberries, dogwood, chokeberry.
"Patriot" dị mma maka ịba ụba n'ọtụtụ buru ibu, dịka ọmụmaatụ, maka ire ere. Mfri eke tomato nwere ike ijide alaka maka ruo ụbọchị 10 na-adaghị ada, nke na-eme ka ha nchịkọta nnọọ adaba.
Blueberries "Patriot", dịka nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche dị na kọntaktị ubi, na-anabata oyi oyi, ọnụ ọgụgụ adịghị atụ egwu n'okpuru -30 Celsius C - ọ bụ iji kpuchie shrub mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-ada. Uru ọzọ bụ nguzo siri ike na-eguzogide ọrịa ndị kachasị dị ka mbubreyo, ire ere na ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa! Ebe maka akuku blueberries na-emetụta uto na mkpụrụ nke ohia. A ghaghị kụrụ ya na ebe dị mma, ma ọ bụghị ya, mkpụrụ tomato ga-esi ike, ọnụ ọgụgụ ha ga-ebelata.
Blueberry ogologo iche "Bluecrop" nwetara otu ihe a ma ama na United States. Osisi shrub na-eto eto ruo mita 2 n'ogologo, mkpụrụ osisi ahụ buru ibu, ha ruru 2 cm. Bleukrop na-amị mkpụrụ site na njedebe nke ọnwa July ruo na ngwụsị nke August. Na nlekọta kwesịrị ekwesị, a ga-agbatị oge a maka ọnwa ọzọ.
Mkpụrụ toro eto nwere ike ịnọgide na ohia ruo izu atọ. Mana ekwesiri ighota na oburu na i hapuru ha n'osisi ahu, mgbe ahuru ighota na inye nri osisi kwesiri ibuwanye. Nke a ga - enye aka imubata nri maka ripening ihe ndị na - esonụ. Mkpụrụ dị elu, nchebe dị mma n'oge njem, nakwa ikike ịmepụta usoro nke ịbịkọta tomato na-eme ka ụdị dịgasị iche iche dị mma maka ịkụpụta ụlọ ọrụ. Ohia bụ ntu oyi na - eguzogide oyi ruo -30 Celsius C.
Ihe nlekọta maka "Blyukrop" gụnyere:
anya n'etiti osisi ọ dịkarịa ala 1.5 m;
amanyere bụ iwu nke mmiri kwachaa nke mebiri emebi na akọrọ alaka;
ị na-agbanye mmiri na ịkụgharị osisi ahụ mgbe niile.
O kwesịkwara ịma ọdịiche nke ụdị blueberries mara mma na Northland.
N'ime oke iche "Northblue" dị nnọọ "mkpụmkpụ" - Ọdịdị ya dị elu ruru mita 1. Ma, n'agbanyeghị ogo ala, owuwe ihe ubi nke ohia nwere ike iru 3 n'arọ.
Otu ihe dị iche iche bụ iguzogide ntu oyi - ndị na-azụlite ndị America na-akpọ nọmba ahụ na -40 Celsius C. Ma, ị gaghị anwale mmiri frosts - ọ bụrụ na mpaghara oyi gị nwere ike iru -30 Celsius C, mgbe ahụ, ọ ka mma iji nzuzo zoo nke bushes.
Nlekọta na-enweghị ncheta na owuwe ihe ubi siri ike mee Northble onye nleta na-agakarị n'ubi onwe ya.
Ị ma? Blueberries dị n'etiti atọ kachasị ewu ewu tomato na North America. A na-eme ememe dị iche iche n'ebube ya, beri a bụ ọbụna akara nke steeti New Jersey.
Osisi dị elu ruru 2 mita. Na tomato na-eto site na njedebe nke July, ha size bụ 15 mm. Ọdịdị na-arụpụta ihe dị elu, na-enye nlekọta kwesịrị ekwesị site na ohia nwere ike ịnakọta ihe dị ka kilogram 10 nke tomato.
Ọdịiche "Osimiri" na-esite na njedebe nke ọnwa July - a na-ewere ya dị ka ụtụtụ. Na nlekọta nke osisi unpretentious. Na mgbakwunye na mkpụrụ dị elu, a na-enwekwa ekele maka anya ya.
Oke ohia di elu enweghi ike iru otu mita na ọkara. Mana n'otu oge ahụ, ọ dị ike ma na-agbapụ. Ọ ga-ekwe omume ịnakọta ma ọ dịkarịa ala kilogram nke tomato site na ohia, na iji nlezianya na-elekọta, mkpụrụ mkpụrụ osisi a na-egbute nwere ike iru 7 kilogram. Ogologo ha bụ nkezi, agba na-acha anụnụ anụnụ.
Akpụ ahụ dị oke, nke na-eme ka o kwe omume ikpughe Bluebold maka njem ma ọ bụ nchekwa nchekwa oge. Nke a dịgasị iche iche jikọtara ya na osisi ndị ọzọ ornamental ndị e ji mee ihe na odida obodo.
Ọ dị mkpa! Blueberries chọrọ ala acidic. Iji nweta ọkwa pH chọrọ, acid citric ma ọ bụ mmanya na-agbakwunye ala. Ọzọkwa bushes ndị a Jide n'aka na ifatilaiza na peat.
"Puru" na-ezo aka n'etiti oge dị iche. Mkpụrụ mbụ nwere ike ịhọrọ n'etiti July. Osisi Blueberry "Puru" na-eto na 1.7-2.0 m n'ịdị elu, ọ bụ ziri ezi, nke, site n'ụzọ, na-enye ohere iji blueberries maka nhazi ogige na saịtị ahụ.
Mkpụrụ nke ohia ruru 5-7 kg. "Puru" kwadoro njem. Ihe dị iche na nke a dị iche iche bụ mkpuchi mkpuchi nke anụ ahụ na akpụkpọ mkpụrụ - ọ na-eje ozi dịka ihe mgbochi nchedo maka pests.
Ohia bu ndi ziri ezi, alaka ndi ozo adighi anya. Elu ruru 180 cm. Kwuo "Duke" nke a na-eme ka ọ ghọọ ntu oyi na oke okpomọkụ. Mkpụrụ osisi na-eto eto n'ogologo, uto na nwetakịrị nta, na mgbe nchekwa ahụ na-aba ụba.
Nri owuwe ihe ubi na-eme ka otu mkpụrụ vaịn na-emeghe, ma owuwe ihe ubi nwekwara ike idozi ya. Blueberries "Duke" anabataghị ala mmiri dị ukwuu. N'ime atụmatụ nlekọta nke ohia - kwachaa kwachaa, nke na-emetụta oke owuwe ihe ubi.
Tọọ "Ọwụwa anyanwụ" ọ dịkarịghị eji maka mmepụta ihe. Nke a bụ tumadi n'ihi ogologo oge ịmị mkpụrụ na obere arụpụtaghị ihe. Iji nweta ihe ubi nke n'arọ nke 8, tomato ga-eru afọ 4.
Mana nke a anaghị egbochi mkpụrụ osisi ahụ - ha na-atọ ụtọ, ma mgbe nchekwa ahụ na-aghọkwu ihe jupụtara. Akpụkpọ ahụ dị oke, nke na-eme ka Ọdabara dị mma maka njem. Iguzogide ọrịa dị iche iche na ọkwa dị ala.
Ị ma? E jiriwo ihe ọṅụṅụ mmiri ara ehi mee ihe n'oge ochie iji kpaa uwe, ụlọ na ọbụna nsen Ista.
Blueberry "Toro" - dabere na nkọwa ahụ, dịgasị iche iche na-eto eto na-amalite n'oge ma ọ bụ n'etiti ọnwa August. Osisi dị elu, site na 1.8 ruo 2 m, mkpụrụ osisi dị na alaka ahụ dị ka ụyọkọ mkpụrụ vaịn. A naghị asacha ma ọ bụ gbawara mkpụrụ osisi gbara agba, nke na-eme ka ha dabara maka nchekwa na njem ogologo oge.
N'etiti minuses nke dị iche iche "Toro", ọ ga-ekwe omume ịhụ obere nguzogide ọrịa, karịsịa, ọrịa na-efe efe, ebe osisi ahụ na-enwe mmetụta nke mgbanwe okpomọkụ na enweghi mmiri n'ime ala.
Ma, n'aka nke ọzọ, ngwa ngwa na mpempe akwụkwọ tomato, nnukwu mkpụrụ osisi na ihe ụtọ ha na-atọ ụtọ na-eme ka o nwee ike ịnọgide na-ebute ụzọ n'etiti ndị ọzọ na-acha anụnụ anụnụ ndị kwesịrị ekwesị maka ịzụ ahịa.
Bush "Elizabeth" na-eto elu site na 1.5 ruo 2 m. Mkpụrụ osisi buru ibu (ruo 22 mm) bụ ụdị nke a. "Elizabeth" nwere ezigbo nkwụsị. Mkpụrụ osisi achacha acha anụnụ anụnụ na agba, Ome nwere ntakịrị ọbara ọbara tint. Mkpụrụ ahụ dị elu, a na-echekwa tomato dị mma n'oge njem, ebe ọ bụ na ha anaghị adabara nchekwa nchekwa oge.
"Elizabeth" dịgasị iche iche enwetawo ọmarịcha ewu ewu n'etiti ndị na-elekọta ugbo n'ihi nsị na okpukpo zuru okè. Blueberry "Elizabeth", dịka nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, bụ nchịkọta onwe onye, ​​ma, iji nweta ihe ọkụkụ na ọkwa dị elu, ọ bụ ihe na-achọsi ike ịnwe na saịtị ahụ ọtụtụ ụdị nke blueberries.
Blueberry "Ezi" na-amị mkpụrụ na mbubreyo July - mmalite August na ọ bụ na-ajụ n'oge dị iche iche. Ogologo shrub adịghị elu karịa 160 cm. Blueberry "Bonus" bụ ama maka ogo nke tomato, na-elekọta osisi ahụ, mkpụrụ osisi ahụ na-eto ruo 30 mm.
Nke a bụ ihe dị iche iche na-acha breeze, ma ndị na-azụ atụrụ na-ele ya anya dị ka ọkwá dị ukwuu, ọ bụ n'ihi nnukwu mkpụrụ nke ohia na nnukwu nke tomato. Ha na-atọ ụtọ ụtọ, akpụkpọ ahụ dị oke, na mkpuchi ngwongwo nke na-enye gị ohere ibufe nnukwu mkpụrụ osisi na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Blueberry ohia "Spartan" esi na 1.6 ruo 1.9 m. Ọrụ ya dị oke - na nlekọta kwesịrị ekwesị, ị nwere ike inweta 6 n'arọ site na ohia. N'okwu a, mkpụrụ osisi ndị dị na alaka anaghị echekwa - ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nweta ihe ubi, ha na-emegharị. Oge mgbokọta a tụrụ aro bụ otu ugboro n'izu.
Mkpụrụ ahụ na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ tart. Ntugide ntu oyi dị ala. Na mgbakwunye, mgbe a na-azụlite ya na saplings, ụfọdụ nsogbu nwere ike ibili - saplings na-adọrọ mmasị na nkà na ụzụ ha na-arụ ọrụ, ndị ome ahụ adịghị eto nke ọma, na afọ abụọ mbụ, uto ha adịghị ngwa ngwa.
Maka ihe mma nke ibé ha na-akụ a chubushnik, snowberry, lilac, oghere uhie, boxwood, ash ash, budleyu, spirea, heather, na-acha ọcha turf, agha agha, Brugmansia, decorative honeysuckle.
Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị mụtara na blueberries nwere ike ọ bụghị naanị na ihe ubi mma, ma nkọwa zuru ezu nke ụdị ga-enyere gị aka ikpebi na ubi ubi.